मलेसियाबाट आयो दुखद् खबर, कामदारलाई सुरक्षित रहन आग्रह ! - jagritikhabar.com
मलेसियाबाट आयो दुखद् खबर, कामदारलाई सुरक्षित रहन आग्रह !
त्यस्तै – सरकारले कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको सङ्क्रमण देखिएका अफ्रिकासहितका नौ देशबाट आउने यात्रुलाई नेपाल प्रवेशमा अनुमति नदिने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सम्बन्धमा थप स्पष्ट नीति बनाउने भएको छ । प्रतिदिन दुई लाख जनालाई खोप दिने गरी व्यवस्था मिलाउन पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।